ဇာတ်လမ်းကောင်း ကြိုက်သူတွေအတွက် "လရဲ့အောက်ဘက်မိုင်အဝေးမှာ" ဝတ္ထု -
ဇာတ်လမ်းကောင်း ကြိုက်သူတွေအတွက် “လရဲ့အောက်ဘက်မိုင်အဝေးမှာ” ဝတ္ထု
ဆရာမ ဂျူးရဲ့ လက်ရာ ဆယ်ကျော်သက် ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုပေါ့…
ဆရာမ ဂျူးရဲ့ ပရိသတ်တွေ ရှိပါလားရှင်? ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာမရဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ စာအုပ်က ထွက်ထားတာတော့ နည်းနည်းကြာပါပြီ။ ကြာဆို ဆယ်နှစ်ကျော် လောက်တော့ ရှိပြီထင်ပါရဲ့။
ဆရာမ ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ စာတွေထဲမှာ ဆယ်ကျော်သက်တွေကို အဓိကထားတဲ့ စာအုပ်အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ ဒီစာအုပ်က အဲဒီထဲက တစ်အုပ်ပါ။ နာမည်က “လရဲ့အောက်ဘက် မိုင်အဝေးမှာ” တဲ့။
ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ ပုံစံက မိသားစု ဇာတ်လမ်းပါပဲ။ အသက်ငယ်ငယ် ချောချော Single Mother တစ်ယောက်နဲ့ လူပျိုပေါက်အရွယ် သားနှစ်ယောက်ကြားမှာ ဖြစ်ပျက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းကို သဘာဝကျကျ နဲ့ ဆန်းဆန်းလေး တင်ပြထားတာပါ။
ဇာတ်လမ်းအဖွင့်ကို ရေခဲတိုက်ထဲမှာ ဖွင့်ထားပါတယ်။ ဒေါ်ခင်သန့်စင် နဲ့ သားဖြစ်သူ သိဒ္ဓိ တို့က အလောင်းတစ်လောင်းကို လာကြည့်တာပါ။ အလောင်းကို မြင်ပြီး ဒေါ်ခင်သန့်စင် သတိမေ့လဲကျသွားပါတယ်။
သားဖြစ်သူ ဒီပါ ရဲ့ အလောင်းများဖြစ်နေမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်နေရာက ဒီပါမဟုတ်မှန်းသိရတော့ စိတ်သက်သာရာ ရသလို သားအတွက် ရတက်ပွေနေဆဲ စိတ်နဲ့ မေ့လဲသွားတာပါ။
အလင်းသစ် မဂ္ဂဇင်း ရဲ့ ထုတ်ဝေသူနဲ့ အယ်ဒီတာ ဒေါ် ခင်သန့်စင်ဟာ သားဖြစ်သူတွေကို ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးထားသလို သူဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်လာအောင် ပုံသွင်းတတ်သူပါ။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက်မှာတော့ သားအငယ် ဒီပါတစ်ယောက် အိမ်ကနေ ထွက်ပြေးလို့သွားပါတော့တယ်။
သားအကြီး သိဒ္ဓိက အေးတယ်။ အမေ ဖြစ်သူ ပုံသွင်းတဲ့အတိုင်း နေတယ်။ အငယ်ဖြစ်သူ ဒီပါ ကတော့ ဂျစ်ကန်ကန် နိုင်တယ်။ သူ့ကို ဇွတ်ပုံသွင်းတာကို မကြိုက်လို့ ဒီလိုအိမ်ကနေ ထွက်သွားတာပါ။
Related Article >>> ဒီတစ်ပတ်အတွက် ဖတ်စရာ ဘာသာပြန် စာအုပ်(၂)အုပ်
ဒေါ်ခင်သန့်စင် နဲ့ သိဒ္ဓိ တို့ ကြံရာမရဖြစ်နေတုန်း သိဒ္ဓိ သူငယ်ချင်း ကစ်ကစ် ရဲ့ အကူအညီ နဲ့ လူမှုရေး အတိုင်ပင်ခံ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ဆက်သွယ်မိတယ်။ ဒီလို ဆက်သွယ်မိရာကနေ အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းက အတိုင်ပင်ခံ ကိုနေရောင်ခန့် နဲ့ပါ သူတို့တွေ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့တော့ လူတစ်ဦးက သူတို့မိသားစု ဆီကို ဆက်သွယ်လာပါတယ်။ ဒီပါ့ကို ပြန်တွေ့ချင်ရင် သူ့ကို ငွေငါးသိန်းပေးရမယ်လို့ သူက ကမ်းလှမ်းလာပါတယ်။ ဒီ ကမ်းလှမ်းချက်ကို စဉ်းစားပြီးမှ လက်ခံသင့်ကြောင့် ကိုနေရောင်ခန့် ကပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သားဇော ကြောင့် ဒေါ်ခင်သန့်စင်က ဒီငွေကို ပေးလိုက်ချင်နေပါတယ်။ သိဒ္ဓိကတော့ ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းမသိသေးပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ နေရောင်ခန့် နဲ့ ဒေါ်ခင်သန့်စင် တို့ ရင်းနှီးမှုအတိုင်းအတာ ပိုလာတယ်ဆိုတာ သိဒ္ဓိတစ်ယောက် သိလိုက်ရတဲ့အခါ အခြေအနေတွေက ပိုဆိုးလာပါတော့တယ်။
သူတို့သားအမိ ဒီပါ နဲ့ ပြန်တွေ့ခွင့်ရမလား?
သားအမိသုံးယောက် ဘယ်လို အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ဆက်ပြီး ကြုံရဦးမှာလဲ?
ဒေါ်ခင်သန့်စင် နဲ့ နေရောင်ခန့် တို့ရော ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်ကြဦးမှာလဲ? ဆိုတာတွေ သိချင်ရင်တော့ လရဲ့အောက်ဘက် မိုင်အဝေးမှာ စာအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်ကြဦးလို့….
ဒီစာအုပ်က မကြာခင်မှာ ရုပ်ရှင်အဖြစ် ပုံသွင်းတော့မှာ ဖြစ်လို့ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ထားကြနော်။ ဒေါ်ခင်သန့်စင်နေရာမှာ မအူဝဲ (အိန္ဒြာကျော်ဇင်) နဲ့ နေရောင်ခန့်နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်မှာက ယောင်းတို့အချစ်တော် ဒေါင်းဖြစ်ပြီး ဒီဇာတ်လမ်းကို ရိုက်ကူးမှာကလည်း ည ဇာတ်လမ်းရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် ဒါရိုက်တာ ထူးပိုင်ဇော်ဦးဆိုတော့ကာ စောင့်ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ…
ယောင်းတို့ရော ဘယ်လို မြင်ကြလဲဟင်..
ဆရာမ ဂြူးရဲ့ လကျရာ ဆယျကြျောသကျ ဇာတျလမျးလေးတဈခုပေါ့…
ဆရာမ ဂြူးရဲ့ ပရိသတျတှေ ရှိပါလားရှငျ? ရှိတယျဆိုရငျတော့ ဆရာမရဲ့ စာအုပျလေးတဈအုပျနဲ့ မိတျဆကျပေးပါရစေ။ စာအုပျက ထှကျထားတာတော့ နညျးနညျးကွာပါပွီ။ ကွာဆို ဆယျနှဈကြျော လောကျတော့ ရှိပွီထငျပါရဲ့။
ဆရာမ ရေးဖှဲ့ခဲ့တဲ့ စာတှထေဲမှာ ဆယျကြျောသကျတှကေိုအဓိကထားတဲ့ စာအုပျအနညျးငယျရှိပါတယျ။ ဒီစာအုပျက အဲဒီထဲက တဈအုပျပါ။ နာမညျက “လရဲ့အောကျဘကျ မိုငျအဝေးမှာ” တဲ့။
ဒီဇာတျလမျးရဲ့ ပုံစံက မိသားစု ဇာတျလမျးပါပဲ။ အသကျငယျငယျ ခြောခြော Single Mother တဈယောကျနဲ့ လူပြိုပေါကျအရှယျ သားနှဈယောကျကွားမှာ ဖွဈပကျြတဲ့ ဇာတျလမျးကို သဘာဝကကြ နဲ့ ဆနျးဆနျးလေး တငျပွထားတာပါ။
ဇာတျလမျးအဖှငျ့ကို ရခေဲတိုကျထဲမှာ ဖှငျ့ထားပါတယျ။ ဒျေါခငျသနျ့စငျ နဲ့ သားဖွဈသူ သိဒ်ဓိ တို့က အလောငျးတဈလောငျးကို လာကွညျ့တာပါ။ အလောငျးကို မွငျပွီး ဒျေါခငျသနျ့စငျ သတိမလေဲ့ကသြှားပါတယျ။
သားဖွဈသူ ဒီပါ ရဲ့ အလောငျးမြားဖွဈနမေလားဆိုပွီး စိုးရိမျနရောက ဒီပါမဟုတျမှနျးသိရတော့ စိတျသကျသာရာ ရသလို သားအတှကျ ရတကျပှနေဆေဲ စိတျနဲ့ မလေဲ့သှားတာပါ။
အလငျးသဈ မဂ်ဂဇငျး ရဲ့ ထုတျဝသေူနဲ့ အယျဒီတာ ဒျေါ ခငျသနျ့စငျဟာ သားဖွဈသူတှကေို ရညျမှနျးခကျြကွီးကွီးထားသလို သူဖွဈစခေငျြတဲ့အတိုငျး ဖွဈလာအောငျ ပုံသှငျးတတျသူပါ။ ဒီလိုနဲ့ တဈရကျမှာတော့ သားအငယျ ဒီပါတဈယောကျ အိမျကနေ ထှကျပွေးလို့သှားပါတော့တယျ။
Related Article >>> ဆယျကြျောသကျ အရှယျတိုငျး မဖွဈမနဖေတျသငျ့တဲ့ စာအုပျနှဈအုပျ
သားအကွီး သိဒ်ဓိက အေးတယျ။ အမေ ဖွဈသူ ပုံသှငျးတဲ့အတိုငျး နတေယျ။ အငယျဖွဈသူ ဒီပါ ကတော့ ဂဈြကနျကနျ နိုငျတယျ။ သူ့ကို ဇှတျပုံသှငျးတာကို မကွိုကျလို့ ဒီလိုအိမျကနေ ထှကျသှားတာပါ။
Related Article >>> ဒီတဈပတျအတှကျ ဖတျစရာ ဘာသာပွနျ စာအုပျ(၂)အုပျ
ဒျေါခငျသနျ့စငျ နဲ့ သိဒ်ဓိ တို့ ကွံရာမရဖွဈနတေုနျး သိဒ်ဓိ သူငယျခငျြး ကဈကဈ ရဲ့ အကူအညီ နဲ့ လူမှုရေး အတိုငျပငျခံ အဖှဲ့အစညျးတဈခုကို ဆကျသှယျမိတယျ။ ဒီလို ဆကျသှယျမိရာကနေ အဲ့ဒီအဖှဲ့အစညျးက အတိုငျပငျခံ ကိုနရေောငျခနျ့ နဲ့ပါ သူတို့တှေ ရငျးနှီးကြှမျးဝငျလာခဲ့ပါတယျ။
ဒီလိုနဲ့ တဈနတေ့ော့ လူတဈဦးက သူတို့မိသားစု ဆီကို ဆကျသှယျလာပါတယျ။ ဒီပါ့ကို ပွနျတှခေ့ငျြရငျ သူ့ကို ငှငေါးသိနျးပေးရမယျလို့ သူက ကမျးလှမျးလာပါတယျ။ ဒီ ကမျးလှမျးခကျြကို စဉျးစားပွီးမှ လကျခံသငျ့ကွောငျ့ ကိုနရေောငျခနျ့ ကပွောပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ သားဇော ကွောငျ့ ဒျေါခငျသနျ့စငျက ဒီငှကေို ပေးလိုကျခငျြနပေါတယျ။ သိဒ်ဓိကတော့ ဘာလုပျရမယျမှနျးမသိသေးပါဘူး။ ဒီလိုအခွအေနမှော နရေောငျခနျ့ နဲ့ ဒျေါခငျသနျ့စငျ တို့ ရငျးနှီးမှုအတိုငျးအတာ ပိုလာတယျဆိုတာ သိဒ်ဓိတဈယောကျ သိလိုကျရတဲ့အခါ အခွအေနတှေကေ ပိုဆိုးလာပါတော့တယျ။
သူတို့သားအမိ ဒီပါ နဲ့ ပွနျတှခှေ့ငျ့ရမလား?
သားအမိသုံးယောကျ ဘယျလို အဖွဈအပကျြတှနေဲ့ ဆကျပွီး ကွုံရဦးမှာလဲ?
ဒျေါခငျသနျ့စငျ နဲ့ နရေောငျခနျ့ တို့ရော ဘာတှေ ဆကျဖွဈကွဦးမှာလဲ? ဆိုတာတှေ သိခငျြရငျတော့ လရဲ့အောကျဘကျ မိုငျအဝေးမှာ စာအုပျကို ဖတျကွညျ့ကွဦးလို့….
ဒီစာအုပျက မကွာခငျမှာ ရုပျရှငျအဖွဈ ပုံသှငျးတော့မှာ ဖွဈလို့ ဖတျဖွဈအောငျ ဖတျထားကွနျော။ ဒျေါခငျသနျ့စငျနရောမှာ မအူဝဲ (အိန်ဒွာကြျောဇငျ) နဲ့ နရေောငျခနျ့နရောမှာ သရုပျဆောငျမှာက ယောငျးတို့အခဈြတျော ဒေါငျးဖွဈပွီး ဒီဇာတျလမျးကို ရိုကျကူးမှာကလညျး ည ဇာတျလမျးရဲ့ ပဲ့ကိုငျရှငျ ဒါရိုကျတာ ထူးပိုငျဇျောဦးဆိုတော့ကာ စောငျ့ကွညျ့ရမယျ့ ဇာတျကားတဈကား ဖွဈလာလိမျ့မယျလို့ ထငျပါတယျ ယောငျးတို့ရေ…
ယောငျးတို့ရော ဘယျလို မွငျကွလဲဟငျ..
Tagged Book, Book review, Juu, Teeagers
Posted on October 6, 2018 October 6, 2018 Author Wathun
Posted on February 1, 2019 Author Sugar Cane
လက်ကမချချင်အောင် စွဲဆောင်နိုင်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ပေါ့
နှလုံးမူသင့်တဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ ဘဝနေနည်းတွေကို သင်ပြပေးထားတဲ့ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး စာအုပ်တစ်အုပ်
Posted on March 8, 2019 March 8, 2019 Author Yin Sandi Ko